टि भी बनाउँन आएका अप्रेटरसँगको स’म्बन्धका कारण एक महिला डाक्टरको जी’वन स मा प्त – Sadhaiko Khabar
टि भी बनाउँन आएका अप्रेटरसँगको स’म्बन्धका कारण एक महिला डाक्टरको जी’वन स मा प्त
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: ९:४२:५१
काठमाडौं/ एक महिला डाक्टरको जीव’न स’माप्त पा’रिएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशमा यस्तो घ ट ना भएको हो । त्यहाँको ताजनागरी आग्राको पोश क्षेत्रमा शुक्रवार दिउँसो एक महिला डाक्टरको जीव’न स’माप्त पारि’एको हो । यो घट’नाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा स’नस’नी फैलाएको छ ।
परिवारले टिभी ठिक गर्न आएको अपरेटरमाथि आ’रोप लगाएका छन् । यद्यपि प्रह’रीले यस स’म्बन्धलाई प्रेम प्रसंगसँग हेर्दैछ । प्रह’री नजिकै सीसीटीभी क्यामेरा खोज्दै छ । एडीजी देखि सबै प्र ह री चौकीको बल घटना’स्थल पुगेको छ ।
जानकारीका अनुसार प्लास्टिक सर्जन डा. अजय सिंघल कमला नगर इलाकामा बस्दै आएका थिए । उनको डेन्टिस्ट (दाँतको डाक्टर) पत्नी ३८ वर्षीया डा. निशा र दुई बच्चाहरुसँगै थिइन् । परिवारका सदस्यहरूले भने कि अपरेटर शुभम्लाई बेलुका बोलाइएको थियो, जब टिभी केबलको समस्या थियो ।
शुभम् घरमा आए र दुई बच्चाहरूलाई कोठामा बस्न भनेका थिए । यसै बीचमा, शुभम् निशासँगै अर्को कोठामा भएको भनिएको छ । केही समयपछि जब निशा चि’च्या’ईन्, तब बच्चाहरू बाहिर आएका थिए । बच्चाहरुलाई शुभम्ले तरकारी का’ट्न’ प्रयोग हुने औ’जार देखाउँदै तर्सा’उन खोजेका थिए । प्रह’रीले सीसीएसटीभी फुटेजमा शुभम् घरभित्र आइरहेको बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार महिला डाक्टर र शुभम् बीच बारम्बार लामो फोन वार्तालाप हुँदै आएको देखिन्छ । प्रह’रीले यसको प्रमाण भेट्टाएको छ । केही दिन अघि उक्त महिला डाक्टरले आ’रोपी शुभम्लाई उनको ट्रान्स यमुना क्षेत्रमा मोबाइल पसल खोल्न आर्थिक सहयोग पनि गरेकी थिइन् ।
स्तब्ध छिमेकीहरू पनि यस सम्बन्धलाई लिएर निशाका पतिले पनि जानकारी पाएको बताउँछन् । पतिले स’म्बन्धबारे जानकारी पाएपछि उनीहरुको स’म्बन्ध सं’कटमा पर्न थालेको पनि बताइएको छ । यद्यपि प्रह’रीले आरो’पितको पहिचानको बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
४७९ पटक हेरिएको